Union Election Commission (UEC)
Follow on UEC Facebook
အများယုံကြည်လက်ခံသည့် ရွေးကောက်ပွဲမှသည် ဒီမိုကရေစီနိုင်ငံသို့ ...Credible Elections Paving The Way To Democracy
ပြည်ထောင်စုရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်ဥက္ကဋ္ဌ ဦးလှသိန်း ဉရောပသမဂ္ဂရွေးကောက်ပွဲနောက်ဆက်တွဲလေ့လာရေးအဖွဲ့ခေါင်းဆောင်အား လက်ခံတွေ့ဆုံ
ကျား/မ တန်းတူညီမျှရေးနှင့် အမျိုးသမီးများကဏ္ဍမြှင့်တင်ရေးဆိုင်ရာမူဝါဒ ဆရာဖြစ်သင်တန်း ဖွင့်ပွဲအခမ်းအနားကျင်းပ
ပြည်ထောင်စုရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်ဥက္ကဋ္ဌ ဦးလှသိန်း မြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာ သြစတြေးလျ သံအမတ်ကြီး H.E. Ms. Andrea Faulkner ဦးဆောင်သော အဖွဲ့အား လက်ခံတွေ့ဆု
ပြည်ထောင်စုရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်ဥက္ကဋ္ဌ ဦးလှသိန်း မြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာ ဒိန်းမတ် သံအမတ်ကြီး H.E. Mr. John Nielsen ဦးဆောင်သော အဖွဲ့အား လက်ခံတွေ့ဆုံ
ကန့်ကွက်နိုင်ကြောင်း အများသိစေရန် ကြေညာခြင်း
မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီး၊ မဟာအောင်မြေမြို့နယ်၊ မဟာမြိုင်(၁)ရပ်ကွက်၊ ၄၀×၄၁ နှင့် ၆၇×၆၈ လမ်းကြား၊ ကံ့ကော်လမ်း၊ အမှတ် (ဓ-၁/၇၀-ခ)တွင် ပါတီရုံးချုပ်တည်ရှိသော ရှမ်းနီ (တိုင်းလိုင်)နှင့် မြောက်ပိုင်း
နိုင်ငံရေးပါတီအဖြစ် မှတ်ပုံတင်ခွင့်ပြုထားခြင်းကို ပယ်ဖျက်၍ ပါတီအား ဖျက်သိမ်းခြင်း
ပြည်ထောင်စုရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်သည် အင်းတိုင်းရင်းသားအဖွဲ့ချုပ်ပါတီ ကို မှတ်ပုံတင် အမှတ် (၈၆) ဖြင့် ၉-၆-၂၀၁၅ ရက်စွဲပါ ကြေညာချက်အမှတ် (၁၆/၂၀၁၅)ဖြင့်
နေပြည်တော်၊ ဒက္ခိဏသီရိမြို့နယ်၊ ဒက္ခိဏသီရိရပ်ကွက်၊ သူရိယလမ်းနှင့် မြတ်လေးရုံ လမ်းထောင့်၊ အမှတ် (ဒ/၃၂၂၀၆) တွင် ပါတီရုံးချုပ်တည်ရှိသော အမျိုးသားနိုင်ငံရေးဒီမိုကရက်တစ် ပါတီ
ပြည်ထောင်စုရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်သည် နိုင်ငံရေးပါတီမှတ်ပုံတင်ခွင့် လျှောက်ထားချက် များကို စိစစ်ခွင့်ပြုပေးလျက်ရှိရာ ၂၀၁၉ ခုနှစ်၊ ဖေဖော်ဝါရီလ ၂၇ ရက်နေ့တွင်
ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး၊ မင်္ဂလာတောင်ညွန့်မြို့နယ်၊ ပုသိမ်ညွန့်ရပ်ကွက်၊ ပုသိမ်ညွန့် (၅)လမ်း၊ မြေညီထပ်၊ အမှတ်(၉) တွင် ပါတီရုံးချုပ်တည်ရှိသော အခြေခံလူတန်းစားဘဝမြင့်မားရေး ပါတီ
နိုင်ငံရေးပါတီများမှတ်ပုံတင်ခြင်းဥပဒေ ပုဒ်မ ၉ အရ နိုင်ငံရေးပါတီအဖြစ် မှတ်ပုံတင် ခွင့်ပြုထားပြီးဖြစ်သည့် ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး၊ မင်္ဂလာဒုံမြို့နယ်၊ သင်္ဃန်းကျွန်းကြီး၊
ရခိုင့်ဦးဆောင်ပါတီ[Arakan Front Party(AFP)]အား နိုင်ငံရေးပါတီအဖြစ် မှတ်ပုံတင်ခွင့်ပြုခြင်း
ရခိုင်ပြည်နယ်၊ စစ်တွေမြို့၊ အိုးတန်းရပ်ကွက်၊ ရွှေဘန်းလမ်း၊ ရဘ-၁တွင် ပါတီရုံးချုပ်ဖွင့်လှစ်ထားရှိသော ရခိုင့်ဦးဆောင်ပါတီ[Arakan Front Party(AFP)]အား
နိုင်ငံရေးပါတီများမှတ်ပုံတင်ခြင်းဥပဒေ ပုဒ်မ ၉ အရ နိုင်ငံရေးပါတီအဖြစ် မှတ်ပုံတင် ခွင့်ပြုထားပြီးဖြစ်သည့် ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး၊ မင်္ဂလာဒုံမြို့နယ်၊ ထောက်ကြန့်မြို့၊ ပဲခူးလမ်း ရပ်ကွက်၊ ဦးဘသင်းလမ်း၊ အမှတ်(၃)
ရခိုင့်ဦးဆောင် ပါတီ [Arakan Front Party (AFP)] က ပြည်ထောင်စုရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်သို့ နိုင်ငံရေးပါတီ မှတ်ပုံတင်ခွင့် လာရောက်လျှောက်ထား
၂၄-၄-၂၀၁၉ ရက်နေ့တွင် ကြားနာစစ်ဆေးမည့် ကန့်ကွက်လွှာအမှုစာရင်း
တပ်မတော်သားတိုင်းဒေသကြီးလွှတ်တော် သို့မဟုတ် ပြည်နယ်လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ် ကိုးဦး အစားထိုးပြောင်းလဲခြင်း
၂၀၁၅ ခုနှစ်၊ နိုဝင်ဘာလ ၈ ရက်နေ့တွင် ကျင်းပခဲ့သည့် ဒုတိယအကြိမ် ပါတီစုံဒီမိုကရေစီ အထွေထွေရွေးကောက်ပွဲတွင် တပ်မတော်ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ်က အမည်စာရင်းတင်သွင်းထားသောတပ်မတော်သားတိုင်းဒေသကြီးလွှတ်တော် သို့မဟုတ်
တပ်မတော်သားအမျိုးသားလွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ် လေးဦး အစားထိုးပြောင်းလဲခြင်း
၂၀၁၅ ခုနှစ်၊ နိုဝင်ဘာလ ၈ ရက်နေ့တွင် ကျင်းပခဲ့သည့် ဒုတိယအကြိမ် ပါတီစုံဒီမိုကရေစီ အထွေထွေရွေးကောက်ပွဲတွင် တပ်မတော်ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ်က အမည်စာရင်းတင်သွင်းထားသော တပ်မတော်သားအမျိုးသားလွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ် လေးဦးကို
တပ်မတော်သား ပြည်သူ့လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ် နှစ် ဦး အစားထိုးပြောင်းလဲခြင်း
၂၀၁၅ ခုနှစ်၊ နိုဝင်ဘာလ ၈ ရက်နေ့တွင် ကျင်းပခဲ့သည့် ဒုတိယအကြိမ် ပါတီစုံဒီမိုကရေစီ အထွေထွေရွေးကောက်ပွဲတွင် တပ်မတော်ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ်က အမည်စာရင်းတင်သွင်းထားသော တပ်မတော်သား ပြည်သူ့လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ် နှစ် ဦးကို
ပြည်ထောင်စုရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင် ဥက္ကဋ္ဌ ဦးလှသိန်း အင်ဒိုနီးရှားနိုင်ငံ အထွေထွေရွေးကောက်ပွဲ လေ့လာရန် ရန်ကုန်မြို့မှ ထွက်ခွာ
ပြည်ထောင်စုရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်ဥက္ကဋ္ဌ ဦးလှသိန်းသည် အင်ဒိုနီးရှားနိုင်ငံ ရွေးကောက်ပွဲ ကော်မရှင်၏ ဖိတ်ကြားချက်အရ အင်ဒိုနီးရှားနိုင်ငံတွင် ကျင်းပမည့် အထွေထွေရွေးကောက်ပွဲကို
မဟာဗျူဟာစီမံကိန်း ( ၂၀၁၉-၂၀၂၂ ) ဆိုင်ရာ အစည်းအဝေးကျင်းပ
ပြည်ထောင်စုရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်နှင့် International Foundation for Electoral Systems ( IFES ) အဖွဲ့တို့ ပူးပေါင်းပြုလုပ်သည့် မဟာဗျူဟာစီမံကိန်း( ၂၀၁၉-၂၀၂၂ ) ဆိုင်ရာ အစည်းအဝေးကို
ပြည်ထောင်စုရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်ဥက္ကဋ္ဌဦးလှသိန်း A-WEB အဖွဲ့၏Director of Project Department ဖြစ်သူ Mr. Sim Hyunwhoa နှင့်အဖွဲ့အား လက်ခံတွေ့ဆုံ
ပြည်ထောင်စုရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်ဥက္ကဋ္ဌဦးလှသိန်းသည် A-WEB အဖွဲ့၏Director of Project Department ဖြစ်သူ Mr. Sim Hyunwhoa နှင့်အဖွဲ့အား
ပြည်ထောင်စုရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်နှင့် International Foundation for Electoral Systems ( IFES ) အဖွဲ့တို့ ပူးပေါင်းကျင်းပသည့် ဥပဒေရေးရာပံ့ပိုးမှုဆွေးနွေးပွဲကို
ဧရာဝတီတိုင်းဒေသကြီး၊ ပုသိမ်ခရိုင်ရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်အဖွဲ့ခွဲမှ ရွေးကောက်ပွဲဆိုင်ရာလုပ်ငန်းခွင်အကြိုဆရာဖြစ်ဆင့်ပွားသင်တန်းဖွင့်
ဧရာဝတီတိုင်းဒေသကြီး၊ ပုသိမ်ခရိုင်ရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်အဖွဲ့ခွဲမှ ရွေးကောက်ပွဲ ဆိုင်ရာလုပ်ငန်းအကြိုဆရာဖြစ်ဆင့်ပွားသင်တန်း (ပုသိမ်မြို့နယ်) ကို ြဂုတ်လ ၃၀ ရက်နေ့၌ ပုသိမ်မြို့၊
ချင်းပြည်နယ်၊ ရွေးကောက်ပွဲဆိုင်ရာစေ့စပ်ညှိနှိုင်းရေးကော်မတီ၏ ကြားဖြတ်ရွေးကောက်ပွဲဆိုင်ရာ လုပ်ငန်းညှိနှိုင်း အစည်းအဝေး ဟားခါး၌ကျင်းပ
ချင်းပြည်နယ်၊ ပြည်နယ်ရွေးကောက်ပွဲဆိုင်ရာစေ့စပ်ညှိနှိုင်းရေးကော်မတီ၏ ကြားဖြတ် ရွေးကောက်ပွဲဆိုင်ရာ လုပ်ငန်းညှိနှိ်ုင်းအစည်းအဝေး(၁/၂၀၁၈)ကို သြဂုတ်၂၉ ရက် မွန်းလွဲ ၁နာရီခွဲက
ရခိုင်ပြည်နယ်၊ ကျောက်ဖြူခရိုင်၊ အမ်းမြို့နယ်ရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင် အဖွဲ့ခွဲရုံး၌ ရွေးကောက်ပွဲဆိုင်ရာလုပ်ငန်းစဉ်များကို သိရှိနားလည်စေရန်ရည်ရွယ်၍
February, 2019 (8)
November, 2018 (15)
October, 2018 (11)
ပြည်ထောင်စုရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင် ဆက်သွယ်ရန် လိပ်စာနှင့် ဖုန်းနံပါတ်များ
၂၀၁၉ - ၂၀၂၂ Download
ကျား/မ တန်းတူညီမျှရေးနှင့် အမျိုးသမီးများကဏ္ဍမြှင့်တင်ရေးဆိုင်ရာမူဝါဒ (Myanmar)
ကျား/မ တန်းတူညီမျှရေးနှင့် အမျိုးသမီးများကဏ္ဍမြှင့်တင်ရေးဆိုင်ရာမူဝါဒ (English)
Union Election Commision Strategic Plan
2014 - 2018 Download
၂၀၁၄ - ၂၀၁၈ Download
ကော်မရှင် Download Mobile App
Office No. 22, Zeyahtani2Street, Nay Pyi Taw, Myanmar.
ရည်ရွယ်ချက် တာဝန်နှင့်လုပ်ပိုင်ခွင့်များ ဖွဲ့စည်းတာဝန်ပေးအပ်ခြင်း
ပြည်တွင်းမဲဆန္ဒရှင်များ ပြည်ပရောက်မဲဆန္ဒရှင်များ ကြိုတင်မဲပေးပိုင်ခွင့်ရှိသူများ(ပြည်တွင်း)
ဥပဒေ နည်းဥပဒေများ လုပ်ငန်းလမ်းညွှန်များ
နိုင်ငံရေးပါတီများမှတ်ပုံတင်ခြင်း တည်ဆဲ နိုင်ငံရေးပါတီများစာရင်း မှတ်ပုံတင်ခွင့်ပြုခဲ့သည့် နိုင်ငံရေးပါတီများစာရင်း ပယ်ဖျက်ခဲ့သည့် နိုင်ငံရေးပါတီများစာရင်း
မဲဆန္ဒနယ်သတ်မှတ်ခြင်း မဲစာရင်းပြုစုခြင်း စောင့်ကြည့်လေ့လာခြင်း ကြေညာချက်များ အမိန့်နှင့်ညွှန်ကြားချက်များ ကျင့်ဝတ်နှင့်လုပ်ငန်းစဉ်များ နည်းဥပဒေပါပုံစံများ
အရည်အချင်းသတ်မှတ်ချက် အမည်စာရင်းတင်သွင်းခြင်း ရွေးကောက်ပွဲကုန်ကျစရိတ်
ကန့်ကွက်လွှာအမှုတင်သွင်းခြင်း တရားမဲ့ပြုကျင့်မှုများ ပြစ်မှုနှင့်ပြစ်ဒဏ်များ ကန့်ကွက်လွှာအမှုများ ဆုံးဖြတ်ချက်များ အရည်အချင်းပျက်ယွင်းသူများစာရင်း
© Copyright 2018 Election Commission Myanmar. All rights reserved.